फिदिममा सञ्चालित इँटा उद्योगहरु वातावरण प्रदुषणको कारण « News24 : Premium News Channel
फिदिममा सञ्चालित इँटा उद्योगहरु वातावरण प्रदुषणको कारण
पाँचथर सदरमुकाम आसपासमा रहेका इँटा उद्योगले वातावरण प्रदुषणसँगै मानवीय स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर समस्या पारेको स्थानीयको गुनासो छ । पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम नगरपालिका क्षेत्रमा अब्यबस्थित तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएको इँटा उद्योगले वातावरणीय प्रदुषण बढेको स्थानीयको भनाइ छ
फिदिम नगरपालिका क्षेत्रभित्र अहिले आठवटा इटा उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् । इँटा भट्ट् रहेकै क्षेत्र घना बस्ती,बिद्यालय र वन क्षेत्र समेत रहेका छन् । भिएसबि के. प्रबिधिबाट इटा उद्योग संचालन गर्न अनुमति पाएका आठ उद्योग मध्ये छ वटा उद्योगले अहिलेसम्म भिएसबि.के. बिधिमा भट्टी संचालन गर्न सकेका छैनन् । यसरी संचालन हुने उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ र धुलोले वातावरण र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै उद्योग स्थानान्तरण गर्न स्थानीयबासीहरुको माग छ ।
इटा उद्योग संचालन गर्न औद्योगीक ऐन २०४९ मा न्यूनतम बस्ती, विद्यालय र वन क्षेत्र भन्दा पाँच सय मिटर टाढा रहनुपर्ने प्रावधान छ । इटा उद्योगका संचालक गोबिन्द गुरुङले भने चाडै भिएसबि.के.प्रबिधिको उद्योग बनाएर इटा संचालन गर्नेे बताउनुभयो ।
ईटा उद्योगमध्ये समथिङ इटा र मनिष इटा उद्योग भने भि.एस.बि.के प्रबिधिमा संचालन गरिएका छन् । तर ति भट्टि बिद्यालय र वन क्षेत्रभित्रै रहेका छन् । सागर इटा उद्योग वन क्षेत्रमा रहेको छ भने दिपक, एम, शिबकला, यु.एन. र युवामजदुर इटा उद्योग घना बस्तीको बीचमै रहेका छन् । यी इटा उद्योग मापदण्ड बिपरीत रहेको पाइए कारवाही हुने पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको भनाइ छ ।
२०५० सालबाट पाँचथरमा इटा उद्योग संचालन हुदै आएका छन् । यहाँको इटा इलाम र ताप्लेजुङसम्म निर्यात हुँदै आएको छ । जिल्लाको इटा उद्योगबाट राजस्व संकलनमा पनि बृद्धि भएको घरेलु तथा साना बिकास समितिका अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी निकायमले न्युनतम् मापदण्ड पनि नहेरी उद्योग स्थापना गर्न दिने र नियमित अनुगमन नभएका कारण पाँचथरमा संचालनमा रहेका इँटा उद्योगहरुले थप समस्या सिर्जना गरेको स्थानीयहरुको दाबी छ ।